Global Voices teny Malagasy » ‘ Nisafidy Ny Fahanginana Aho Ka Niaritra Izany’ : Miatrika Ny Herisetra An-tokatrano Ao Armenia · Global Voices teny Malagasy » Print
‘ Nisafidy Ny Fahanginana Aho Ka Niaritra Izany’ : Miatrika Ny Herisetra An-tokatrano Ao Armenia
Voadika ny 21 Mey 2019 13:00 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Armenia, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Sary Shutterstock nalain'i Kamira 
“Ny faran'ny taona 2017 no natao ny mariazinay. Tsy raitra be ilay fampakaram-bady, fa nahery ny fitiavanay” hoy i Sona (solon'anarana).
Herinandro monja taorian'ilay fety fampakarambady dia efa nikasi-tanana azy ny vadin'i Sona, nangataka azy mba hilaza aminy ny “lasa ratsiny”.
“Tsy fantatro izay nanjo azy ka nahatonga azy hisaina fa nanana olontiana aho taloha, ka nananako fifandraisana manokana, saingy tsy nanana porofo mazava izy ny amin'izany. Izy no lehilahy voalohany teo amin'ny fiainako, nefa mbola mameno ny lohany ihany ny fisalasalàna. “
“Novelesiny mafy aho.Nilaza izy fa hovonoiny aho raha tsy milaza aminy hoe iza no niaraka tamiko, nefa aho tsy nanana na inona na inona holazaina.”
Niala tamin'ny vadiny i Sona nony farany.
“Nankany amin'ny ray aman-dreniko aho, fa avy hatrany dia nanaraka ahy ny vadiko. Niala tsiny, niangavy ahy mba hiverina, nampanantena fa tsy hisotro na dia pitika toaka aza … nefa tsy nandeha aho. “
“Herinandro vitsivitsy tatỳ aoriana, hita fa hoe bevohoka aho. Nanova ny fiainako izany. Nolazaiko azy fa bevohoka aho, ary nangataka ny mba hiverenako izy, ka dia nanapa-kevitra ny tsy hamela ny zanako tsy hanan-dray aho. “
Nifindra tany Rosia i Sona sy ny vadiny fotoana fohy taorian'ny niverenany . Tiany hifindra izy ireo ahafahany manadino ny “lasa ratsin'ny” vadiny tao Armenia.
“Mazava ho azy, tsy azoko hoe inona ny lasa tiany ho hadinoina, nefa nandeha niaraka taminy ihany aho. Raha mba tsy nandeha mantsy aho….. Tao Armenia, niaro ahy ireo rafozako, fa tany Rosia , tena irery aho. Tsy nisy andro tsy nisotroany. Nahazatra azy ny nanipy ahy toy ny baolina teny amin'ny rindrina. “
“Tapaka ny tanako nandritra ny fotoana iray nidarohany ahy. Nasiana platira sy fatotra niantonany ilay izy; bevohoka valo volana aho tamin'izay. Nalefany tany Armenia aho hiteraka. Taorian'ny fiterahako, nodidiana ny tànako, Satria nisy olana noho ny tsy fetezan'ny fametahana ilay platira. “
Nijanona tany Armenia i Sona taorian'ny niterahany, raha nitohy nipetraka tany Rosia kosa ny vadiny. Tsy nanana fahasahiana hangataka fisarahana amim-badiny mihitsy izy na dia efa roa taona aza ilay zaza.
“Fandavana ny fotokevitra napetrako ho ahy manokana ny andavanandrom-piainako. Fantatro tsara ny zoko, nefa tsy miaro azy ireny aho. Aleoko mangina ary miaritra ny zava-misy. Tsy tiako ho lehibe tsy hanan-dray ny zanako. Tsy vady tsara izy, fa ray tsara kosa, “hoy i Sona.
“Mitohy ny herisetra”
Desambra 2017, nandany lalàna vaovao iray i Armenia hiadiana amin'ny herisetra ao an-tokantrano, izay nanomboka nanan-kery ny volana Jolay 2018.
Mametraka fototra araka ny lalàna sy manaraka ny rafitra misy ilay lalàna mba hisorohana ny herisetra ao an-tokantrano sy ho fiarovana ireo niharan'izany. Izany no natao dia hanomezana fanohanana ara-tsaina, araka ny lalàna ary ara-tsosialy ho an'ireo iharan'ny herisetra, ary koa fanampiana ara-bola vonjimaika raha ilaina.
Taorian'ny nandaniana ilay lalàna, maro ireo no resy lahatra fa hiaro ny vehivavy iharan'ny tsindry hazo lena izy io.
Saingy i Marina Yeghiazaryan, psikology iray miasa amin'ny hopitaly ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Zon'ny Vehivavy  ao Armenia, no nilaza fa tsy nahitany fihenana ny isan'ny vehivavy iharan'ny herisetra an-tokantrano.
“Mbola maharay antso an-tariby an'arivony izahay. Mitohy ny herisetra,” hoy i Yeghiazaryan.
“Maro ny vehivavy no tsy mahafantatra, na amin'izao vanim-potoana izao aza; tsy afaka hiaro ny zony izy ireo. Maro koa ireo olona misoroka ny fifandraisana amina ivontoerana iray momba ny zon'olombelona, aleon'izy ireo mangina sy tsy miresaka ny olana mahazo azy, “hoy izy.
“Nandositra aho mba hanavotako ny ain'ny zanako”
Nilaza i Gayane fa taorian'ny nahaterahany ny zanany no nanomboka ny olana tao anatin'ny ankohonany.
“Tezitezitra amin'ny zavatra rehetra izy ; rehefa mandeha aho, ny feon'ny ny tongotro ; rehefa manasa vilia aho, ny feon'ny rano amin'ny paompy, rehefa manao volo aho, ny feon'ny fanamainana volo. Tena hatezerana be ny azy rehefa mitomany ny zanakay vao teraka. Fiteniny foana ny hoe : “Ampangino io, fa mila maka aina aho,” hoy i Gayane.
Hoy izy hoe ny any amin'ny fianakaviana ara-dalàna, ny fahaterahan'ny zaza iray no manome hafanana ny mpivady, mampifanakaiky kokoa azy ireo, fa ho azy kosa, ny mifanohitra no nitranga, ka lasa niova biby ilay vadiny nalemy paika iny.
“Tena mistery tamiko ny nanjo azy. Tamin'izy namelaka ahy voalohany, taitra mafy aho, tsy noho ilay izy narary, fa noho ilay fahasahiany. Mbola tsy nikasi-tanana ahy mihitsy izy hatramin'izay. “
“Indray mandeha, rehefa nitomany indray ilay zaza tamin'ny alina, avy hatrany izy dia nandrahona hamono anay mianaka raha tsy hampanginiko haingana ilay zaza. Tatỳ aoriana, tsy nijanona teo amin'ny fandrahonana ny fampitandremana nataony. Namely illay zanako ihany koa izy. “
“Mazana no arovako amin'ny vatako ny zanako ka izaho no mitaty ny daka mba tsy hiantefan'izany any aminy. Namono anay toy izany izy nandritra ny iray volana. Indray andro, rehefa izy tany am-piasana iny, nangoniko ny akanjonay ary lasa nandositra izahay. “
Tsy fahampian'ny hoenti-manana
Ny Ivontoerana ho Fanampiana ny Vehivavy no mitantana ilay hany fialofana ao Armenia ho an'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano. Manolotra fanohanana ara-tsaina sy araka ny lalàna ihany koa ilay ivontoerana.
” Afaka mandray vehivavy fito miaraka amin'ny zanany avy ny toernam-pialofanay. Any amin'ny toerana miafina no misy ilay trano. Fenonay ny fepetra rehetra ilaina mba hahatsiarovan'ny olona iray fa tsara aro izy; ananany ny zavatra ilaina rehetra ahafahana mivelona” hoy ny Talen'ilay ivontoerana, Hasmik Gevorgyan.
Amin'izao fotoana izao, vehivavy dimy no mipetraka ao amin'ilay toeram-pialofana. Afaka mijanona hatramin'ny telo volana ireo olona tonga ao, afaka mihoatra izany anefa ny fotoam- pijanonana arakaraky ny mahazo ny tsirairay.
Araka ny voalazan'i Hovhannisyan, tsy ampu ny ho enti-manana hikarakarana ireo vehivavy marobe miatrika herisetra an-tokantrano.
Tamin'ny fotoana nandaozan'i Gayane ny vadiny, tsy nanana fianakaviana tao Armenia izy ; tany ivelany daholo izy ireo. Soa ihany fa nanome trano ho azy ny fianakavian'ny namana akaiky iray.
“Tokony hiantso any amin'ny paositry ny polisy izay olona iharan'ny herisetra ao an-tokantrano, saingy amin'izay fotoana izay, mety hitombo ny olana raha toa ka mila toerana hialofana hitsoahana ilay mpamely azy izy. Nandany ilay lalàna ny fanjakana, saingy tsy nanangana fialofana ho an'ireo niharam-boina, “hoy izy.
“Namonjy ny ainay ilay namako sy ny vadiny. Im-betsaka no nanandrana niditra tao amin'ilay trano ny vadiko, nandrahona ny hiantso polisy izahay. Ny rahalahiny ihany no nahavita nampitony azy, ary nangataka ahy izy mba tsy handao ny vadiko. “
“Tsy vitako ny namela ny helony ary tsy azoko antoka ihany koa fa indray andro any, tsy hamely ny zanako izy mandritra ny fotoana tsy maha-eo ahy.”
“Tapa-taona izay no lasa hatramin'ny nisian'izay helo niaretana izay”, hoy i Gayane, miresaka momba ny zavatra niainany. “Ankehitriny, mieritreritra tsara kokoa aho ary manenina ny tsy nialako taminy aloha kokoa.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/21/137663/
 Ivontoerana ho an'ny Zon'ny Vehivavy: http://www.wrcorg.am/en/home.htm
 Ivontoerana ho Fanampiana ny Vehivavy : http://www.womensupportcenter.org/victim-services/types-of-services/